Degso CyberGhost VPN loogu talagalay Windows
Degso CyberGhost VPN,
CyberGhost VPN waa barnaamij VPN ah oo kuu ogolaanaya inaad si qarsoodi ah uga dhex gasho internetka adoo qarinaya xogtaada shaqsiyeed iyo aqoonsigaaga. Isla mar ahaantaana, iyadoo la kaashanayo barnaamijka, waxaad fursad u leedahay inaad marin aan xad lahayn u hesho dhammaan boggaga internetka ee aad rabto adigoon wax xaddidaad ah ama mamnuuc ah lagu dabbaqin internetka.
Ka shaqeynta hoosta nidaamka OpenVPN oo ku saleysan nidaamka sirta SSL, barnaamijku wuxuu ka shaqeeyaa khadadka qarsoodiga ah ee khaaska ah ee qarsoodiga ah, isagoo qarinaya dhammaan wareejinta xogtaada, macluumaadkaaga shakhsiyeed iyo goobtaada. Sidan oo kale, waxay kuu oggolaaneysaa inaad internetka si qarsoodi ah u dhex gasho.
Sidee loo rakibaa CyberGhost VPN?
Si aad u isticmaasho barnaamijka, waxaad u baahan tahay inaad sameysato koonto isticmaale oo kuu gaar ah oo aad ku gasho barnaamijka koontada isticmaale ee aad abuurtay. CyberGhost VPN, halkaas oo aad ka abuuri karto koonto isticmaale oo bilaash ah, waxay siisaa dadka isticmaala tallaabo diiwaangelin aad u fudud.
Qalabka CyberGhost VPN
Ka dib markaad gasho koontadaada isticmaale ee barnaamijka, oo leh interface aad u fudud, casri ah oo si sahlan loo isticmaali karo, waxaad dooran kartaa waddanka ama cinwaanka IP-ga aad rabto inaad gasho, guji Ku xirnaanta VPN badhanka, samee sameynta isku xirnaanta lagama maarmaanka ah oo aad bilawdo inaad si qarsoodi ah ugu dhex wareegto shabakadaha VPN Waxaad bilaabi kartaa.
Adiga oo dooranaya mid ka mid ah VPN server-ka waddan kasta oo aad ka rabto liiska server-ka, waxaad baari kartaa internetka ku xiran server-yada waddankaas. Waqtigan xaadirka ah, dadka isticmaala Turkiga ee dooranaya mid ka mid ah server-yada dalxiiska ku saleysan ee Jarmalka ayaa u oggolaan doona iyaga inay si dhakhso leh oo kalsooni leh u baaraan internetka.
Kadib markaad ku xirmaan VPN server, waxaad ka eegi kartaa cinwaankaaga cusub ee IP-ga iyo meesha aad hadda ku sugan tahay shaashadda weyn ee barnaamijka. Kadib waad sii wadi kartaa inaad internetka u adeegsato si xor ah oo lagu kalsoonaan karo.
CyberGhost VPN wuxuu si otomaatig ah u tirtirayaa taariikhda biraawsarka iyo buskudka, wuxuu hubiyaa xaqiijinta lambarka sirta ah, wuxuu kormeeraa taraafikada emaylka la soo gudbiyey, isagoo ka dhigaya isku xirnaantaada internetka mid aad u ammaan badan.
Waxay siisaa xal wax ku ool ah dhammaan isticmaaleyaasha internetka ee doonaya inay si xor ah u galaan goobaha xannibmay iyo kuwa la mamnuucay, ka hortagga macluumaadka shakhsiga ah iyo xatooyada xogta, u qaad amnigaaga internetka heerka ugu dambeeya isla markaana si qarsoodi ah u dhex mara.
CyberGhost VPN Noocyada
Horumar: CyberGhost SRL